Bromantane (87913-26-6) hplc≥98% Ndị na-emepụta & Ndị na-ebugharị ya - actorylọ ọrụ
Bromantane bụ ọgwụ nke na-ekwu na ọ ga-eme ka echiche na ahụike dị mma. O nwere ike inye aka belata ike ọgwụgwụ na nchegbu, melite mmụta, na inye aka na mmega ahụ.
Bromantane (87913-26-6) video
Bromantane (87913-26-6) Smmezi
Product Name Bromantane
Chemical Aha N- (4-bromophenyl) adamantan-2-amine
Klaasị ọgwụ ọjọọ Atypical psychostimulant na ọgwụ nchegbu
CAS Number 87913-26-6
molekụla Fnhazi C16H20BrN
molekụla Wasatọ 306.24g
Nkịtị Monoisotopic 306.246 g / mol
Mgbu Point 106-108 ° C
Esi mmiri 404.8 ± 28.0 Celsius C na 760 mmHg
Ọkara Ndụ nke Ndụ Oge 2.75 n'ime ụmụ nwanyị, na oge 4.0 n'ime ụmụ nwoke.
Sume Mmiri na mmiri, mmiri na acetone
Sịkwa akwa Tigwe ụlọ okpomọkụ
Antinye Bromantane (Ladasten) bụ ọgwụ nke chere na ọ ga-eme ka uche na arụ ọrụ nke ọma. O nwere ike inye aka belata ike ọgwụgwụ na nchegbu, melite mmụta, na inye aka na mmega ahụ.
Kedu bromantane (87913-26-6)?
Bromantane aghọwo onye amara n'etiti ọtụtụ ndị na-enweghị ọrụ na afọ ndị ọzọ na ọtụtụ ndị agha na ndị na-eme egwuregwu na-eji ya kemgbe oge 80s. Bromantane na-arụ ọrụ na-akpali akpali na nchekasị n'otu oge ahụ. Ọ bụ ezie na mmetụta abụọ yiri ka ọ na-akụghasị mmetụta nke onye ọ bụla, ọ dị mkpa ka ị mara eziokwu ahụ na Bromantane bụ ezigbo nootropic n'ihi na ọ bụ uche dị jụụ ma na-akpali akpali n'ime otu.
E jiriwo ya iji mee ka ahụ dị gị mma mgbe ọ gasịrị ọrụ ahụ siri ike. Ọ ka na-eme nchọpụta iji chọpụta ma a pụrụ iji ya mee ihe na nkà mmụta ọgwụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-eji ya n'oge gara aga ekwuola na ọ meela ka ọ bụrụ na ha na-eme egwuregwu. A na-ekwukwa na ọ ga - eme ka mmadụ nwekwuo ncheta yana ihe mkpali ha na ike ọgụgụ isi.
Kedu Bromantane (87913-26-6) ọrụ
Usoro Bromantane nke eme ihe dabere na usoro serotonergic na dopaminergic neurotransmitter. Site ugbu a ị nwere ike ịkọ otú ọ na-arụ ọrụ. Mmetụta ya na-eme ka ọ pụta ìhè na Bromantane na-egbochi reuptake abụọ dopamine na serotonin. Ọ bụ ezie na a ka amaghi otú o si eme ka norepinephrine na ahụ dị n'ahụ, a na-enyo enyo ime ya. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị nchegbu Bromantane na-arụ bụ site na ụzọ o si ewusi nkwenye GABA-ergic.
Bromantane (87913-26-6) Ụdị
Nke mbụ, mee ka ọ dị nwayọọ ruo mgbe ị maara otú ahụ gị si emeghachi omume na otú ọ ga-esi die. Mmetụta Bromantane na-amalite ịbanye na ala dịka 10mg, ya mere, usoro ọgwụgwọ gị ga-adabere na ihe ịchọrọ ime. Dịka onye na-amalite, i nwere ike ịmalite site n'iji ya otu ụbọchị tupu ị gụ akwụkwọ na iji ya ugboro abụọ kwa ụbọchị.
Ihe ọzọ ị kwesịrị ịmara bụ na Bromantane na-ejide onwe ya n'ihi na ọ na-etinye ngwa ngwa na ndị ọrụ nwanyi. Ọkara ndụ Bromantane dị obere karịa ụmụ nwanyị ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwoke. Ụmụ nwanyị na-ewere ihe dị ka 2.75 awa iji malite inwe mmetụta Bromantane mgbe ọ na-ewe mmadụ anọ ka ha nwee mmetụta ahụ. Ebe ọ bụ na ọ dị oke lipophilic, nke a na-etinye ngwa ngwa site na tract eriri afọ mgbe ọ na-ekwu okwu ọnụ.
Ogologo Bromantane nke ọ bụla na-amalite na 50-200mg na ụdị usoro ọ bụla karịrị 300mg agaghị akwado. Otutu ndi mmadu choro iji 100-200mg kwa ubochi ubochi na ubochi ka ha choro na madu newere 50-100mg onu ogugu ubochi na uhuruchi. Iji nke a ruo izu abụọ na anọ ọzọ ga - enyere gị aka ịmata nsonaazụ ọma gị.
Bromantane (87913-26-6) Uru
Na-eme ka nchekasị na nrụgide nụ
Mgbe ufodu, ike na-agwu gi ike, o nwere ike iche na i rutela ebe i ghaghi. N'oge a, ọ dị gị ka obi ụtọ dị nnọọ anya site na ị ga-eru. Ọ dị njọ, ozi ọma ahụ bụ na ịbịaru Bromantane enyere gị aka ịnagide mmetụta a ma weghachi ndụ gị. Ụfọdụ n'ime uru Bromantane bụ na ọ na-akwalite echiche nke ntụrụndụ, na-eme ka nkwụsị nke ahụ kwụsị nrụgide nakwa na ọ pụkwara inye aka dochie chemicals nke ụbụrụ nke nwere ike ibelata nrụgide. N'ihi ya, mgbe ị na-ewe Bromantane, ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla nke nrụgide na nchekasị.
Ndị na-eji Bromantane nwere ike ikweta na ọ na-enyere ha aka inwekwu ume mgbe ha na-arụ ọrụ ha. Dịka ọmụmaatụ, ebe dị anya dị ka ihe ịma aka ugbu a ka ọ dị mfe. Ọ bụghị nanị na ọ na-erite uru marathoners ma onye ọ bụla nke na-etinye aka n'ọrụ. Ị ga-achọpụta na site n'iji ntinye Bromantane mee ihe, ị nwere ike ugbu a na-emekwu ihe na ike na ike maka ogologo oge. N'ihi nke a, ị ga-enwe mgbagwoju anya maka ókè ị ga-enwe ike imeri n'enweghị ike gwụrụ gị. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbịakarị ntachi obi gị dị elu karị, inye Bromantane iwu site na Phcoker.com kwesịrị ịbụ ihe ọzọ ị ga - eme.
Ọ na-eweghachite ma na-eme ka ọrụ uche na nke anụ ahụ rụọ ọrụ
Kemgbe ọtụtụ afọ, ọrụ ọrụ uche na nke anụ ahụ anyị nwere ike belata n'ihi ịka nká na ihe ndị ọzọ. N'ụzọ dị nro, Bromantane nwere ike inyere gị aka weghachite ya na igwe. Site n'ịbawanye ọnụego nke anụ ahụ nwere ike isi na arụ ọrụ anụ ahụ siri ike, arụ ọrụ ọrụ ahụ na-emewanye. Maka ọrụ uche, ị ga-enwe ike iche echiche nke ọma ma mee mkpebi dị mma n'ebughị ụbụrụ na-agwụ ike. N'ikpeazụ, ị ga-anọgide na-egbusi nkọ ma ghara ịchọta ụfụ ụbụrụ ọzọ.
Iguzogide ikpo oke ọkụ
Ozugbo ahụ na-emepụta okpomọkụ karịa ka ọ napụtara, ọ nwere ike ibute hyperthermia ma ọ bụ na-ekpo ọkụ. N'ihi ya, ị nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa ndị siri ike. Otu n'ime mmetụta Bromantane bụ na ọ na-egbochi ahụ mmadụ ka ọ ghara ikpo oke ọkụ ma na-eme ka hyperthermia kwụsị.
Mmetụta na-akpata nsogbu
N'otu oge na ndụ, onye ọ bụla enwee nchegbu. Obi na-atụ egwu ma ọ bụ nchegbu nwere ike ịdị obere ma ọ bụ mgbe nile na-emetụta ndụ onye na-adịghị mma. Iji zere ịnata ahụhụ dị otú a, ị nwere ike ịhọrọ iji Bromantane.
Ọ na-akwalite ike na iwepu ike ọgwụgwụ
Ị maara mmetụta ị na-enweta mgbe ị na-esite n'ọrụ na mkpa ịga nnọkọ ntụrụndụ gị. Ikekwe ike gị dị ike ma ọ bụrụ na ị bulie ụkwụ gị nwere ike ịbụ ọrụ. Ọ bụghị nanị na ike ọgwụgwụ na-emetụta ụzọ anyị si arụ ọrụ anụ ahụ mana ọ na-emetụtakwa mmekọrịta gị na ndụ gị, na ndụ ezinụlọ na otu i si arụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nwere ike ọ gaghị ama otu esi emeso ya, iwe Bromantane bụ otu n'ime ngwọta dị irè iji gbochie ike ọgwụgwụ. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị ga-achọ ume ume iji kwadoro gị ụbọchị dum ma were bromantane mmefu bụ ihe kachasị mma ịme. Bromantane na-enye gị ume karia ịme ka ị kpalie ọbụna mgbe ị na-eche na ị na-aka nká na umengwụ na-ejide gị.
Ọ na-eme ka ọmụmụ ihe dị mma na nhazi nke ije
Mgbe anyị na-ekwu banyere imeziwanye usoro mmụta, ọ pụtara na enwere ike ịghọta ihe ọhụrụ. Bromantane na-eme ka ị bụrụ onye mmụta dị irè ma dị mma. Ozokwa, ọ na-eme ka ahụ dịkwuo mma, ma nke a nwere ike ịrụ ọrụ dị mkpa iji melite arụmọrụ egwuregwu.
Na-akwalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ
Kedu onye na-agaghị achọ ịnweta ezigbo usoro ọgwụgwọ? Inwe usoro mgbochi na-enye aka enyere ahụ gị aka ịzaghachi ọrịa na ụzọ kachasị mma. Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na site na nchịkọta mbụ nke Bromantane nke ị na-ewere, ahụ gị nwere ike ịlụso ọrịa ọgụ n'ụzọ dị mma karịa ka ọ nwere ike ịmalite. Mgbochi ahụ dị mma bụ n'ihi mmụba nke mkpụrụ ndụ B na ahụ. Ha bụ mkpụrụ ndụ ọbara ọcha na-enyere ahụ aka n'ịlụso ọrịa ọgụ. Nke ahụ pụtara na iji Bromantane mee ihe, ị ga-enwekwu nchedo pụọ na ọrịa na ọrịa. Bromantane na-enye anyị iwu taa ma na-eleta nleta nleta ugboro ugboro!
Ịbawanye ebe nchekwa
Ị nọ n'ọnọdụ nke na ị gaghị echeta ihe mere n'oge gara aga? O nwere ike na-enye nsogbu, ị ga-ahụkwa onwe gị ụdị usoro ọgwụgwọ nwere ike imeziwanye nke a. Ozi ọma ahụ bụ na Bromantane na-enyere aka na nchekwa nchekwa na nchịkwa nchekwa. Ihe nke a bụ na ị nwere ike icheta ihe niile ị chọrọ. Ọ na-eme nke ọma n'ụzọ dị mkpirikpi ma okwu mkpirikpi ma ogologo oge na-echekwa ikike ị nwere icheta.
Zụrụ Bromantane si Buyaas.com
1 nyochaa maka Bromantane (87913-26-6)
admin - July 5, 2019 :
Ngwaahịa Bromantane ahụ bụ ezigbo uru.
Raw 5a-hydroxy Laxogenin ntụ ntụ (56786-63-1)
Cialis (Tadalafil) ntụ ntụ (171596-29-5)